Waxgaradka Puntland oo Puntland oo si adag uga horyimid Damaca Gorod & Beeshiisa …. – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA Waxgaradka Puntland oo Puntland oo si adag uga horyimid Damaca Gorod & Beeshiisa ….
Waxgaradka Puntland oo Puntland oo si adag uga horyimid Damaca Gorod & Beeshiisa ….
Warsidaha Puntland fm ayaa ogaaday in uu galabtay dhacay kulan weyn oo ay ka qeybgaleen in ka badan 100 qof oo iskugu jira qeybaha kala duwan ee Isimadda, waxgaradka, dhalinyaradda, maamulka gobalka & kan degmada ee Gaalkacyo, diiradana lagu saaray damaca Taliyaha ciidamada dawladda Faderaalka Jen, Gorod ku doonayo in loogu wareejiyo xarumaha dawladda Puntland ee magaaladaas kuyaala qaar kamid ah.
Isimada, Waxgaradka, maamulka iyo qeybihii hadlay oo dhan ayaa soo jeediyey in aysan marnaba suuragal aheyn in la fuliyo damacaas, oo ay sheegeen in uu yahay qorshe mudo dheer ay ku taameysay Galmudug, kaas oo hirgalintiisa ay ka shaqeynayso dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Nabadoonada gobalka Mudug ayaa u sheegay ganacsatada iyo maamulka in aysan qaadi Karin wax talaabo ah oo ku saabsan dhulka gobalka Mudug, isla markaasna ka hadalkiisa ay xaq u leeyihiin waxgaradka oo maalin kasta u taagan sidii dhib kasta ay uga difaaci lahaayeen cadowyada kusoo duula.
Kulanka ayaa mudadii uu socday waxaa hadlay ganacsato shalay la kulantay Taliyaha ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed oo u soo jeediyey qorshahan, qaarkoodna ayba taageereen kuwaas oo galabtay cadeeyey in ay ka laabteen oo aysan waxba heshiis ah lasoo galin Saraakiisha dawladda Faderaalka